Ntinye ederede: Debian GNU / kFreeBSD | Site na Linux
Ntinye ederede: Debian GNU / kFreeBSD
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Nkesa, GNU / Linux
Nyaahụ m jisiri ike ibudata iso nke Debian GNU / kFreeBSD Testing na ya mbipute nke ntinye ma taa, amalitere m ịme ule m na igwe arụmọrụ.
Ihe nrụnye nke nwere iso a bụ otu ihe ahụ nke na-enye anyị Debian na ọnọdụ ederede. E kenyere m ya 128Mb na igwe mebere, iji jiri nwayọọ nwayọọ bulite ya. Ọ Kernel ịwụnye ga-abụ 8.1-1-686 de FreeBSD.
Malite nrụnye, ihe niile na-eme n'otu ụzọ ahụ belụsọ maka nkewa nkebi. N'ebe a, egosiri m nsogbu nke mbụ. Nọmalị na GNU / Linux anyị na-eji Ext3 o Ext4, ma Kernel de FreeBSD ọ bụ naanị na-enye m Ext2. Site ndabara nkebi ka na UFS (Unix Njikwa faili).
Maka ugbu a, m ga-agba ọsọ nyocha ahụ Virtualbox eji usoro a (UFS) iji hụ otu o si eme, na n'otu oge ahụ, m ga-anwa ịnakọta ọtụtụ ozi dị ka o kwere mee gbasara uru na ọghọm ya. N'ezie, ọ bụrụ na m kpebie ịgbanwe gaa na mbipute a DebianEkwesịrị m ịzọpụta m / n'ụlọ.
Ma ọ bụghị ya, ihe niile nkịtị. Versiondị NetInstall na-enye anyị ohere nke ịwụnye a Ntọala Ntọala na a Ihe nkesa SSH. Emechaa wụnye Nri na reboot.
Ma nke ahụ bụ mgbe nsogbu nke abụọ pụtara n’ihu m. Ọ isi mmalite.list ahazi n'otu ụzọ ahụ dị na mbipute ahụ GNU / Linux, ma na ebe nchekwa obodo m nwere Debian, Enweghị m nchịkọta maka Ugbokuta-386, ya mere, m ga-ebudata ha na ịntanetị na maka ụbọchị, my ISP ọ gaghị ahapụ m.
Yabụ ugbu a, akwụsịrị m enyemaka. Echere m na nsogbu ndị a anaghị eme ka m kwụsị inwe mmasị n'ịgbalị Debian GNU / kFreeBSD.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Ntinye ederede: Debian GNU / kFreeBSD
Damn, kernel ahụ sitere na PM.
Iwu a gbanwere Pkg? Ana m ekwu n'ihi na otu ihe ahụ gụnyere osisi ọdụ ụgbọ mmiri FreeBSD
Nhọrọ ọhụrụ a na-adọrọ mmasị, mana maka oge ahụ anaghị adị oke mkpa, anyị ga-ahụ ihe na-eme.
Gịnị mere enweghị isi? Ọ ka na-eji kernel eme ihe
Maka nlele nke @elav mere banyere ya. Echere m na ọ bụrụ na ọnọdụ ndị a-isi ike bilitere maka ya, ọ ga-ekwe omume na ha ga-ebilite maka ọtụtụ ndị ọrụ.
M kwughachiri ya, ọ na-adọrọ mmasị nke ukwuu, mana m ga-echere ịhụ ka @elav si eme na ahụmịhe ọhụụ a.
Enyi ihe nkuzi vidio ga enyere aka maka ndi ohuru dika m ka ihu mgbe nsogbu ndi a bilitere
Nsogbu bụ na enweghị m ego iji biputere nkuzi vidiyo. Otú ọ dị, n'oge na-adịghị anya, m ga-egosi nwụnye nzọụkwụ site nzọụkwụ ka m na-agbalị ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị zipụrụ m na m bulite ya ebe ọzọ na m ezitere gị njikọ ahụ? Ọ bụ ihe ọkụkụ ma enweghị m ike iche ihe ọ bụla ọzọ
Ọ bụrụ na m nwere ike izitere gị ya, ọ ga-apụta na enwere m bandwidth nke ga-enyere m aka bulite ya na mail, ka anyị kwuo, ọ dịghịkwa otú ahụ. Nke ahụ bụ isi ihe mgbochi m nwere, nke ọma, ịnweta saịtị dịka YouTube.
Nsogbu bụ na saịtị na ị bulite ya, n'ezie na anyị agaghị enwe ohere ma 🙁
Ma ndị na-agụ akwụkwọ, ee, ị maara otu esi etinye ya
Enwere m olileanya na ị ga-ahụ akụkọ ndị ọzọ na log a, njem ahụ dị ezigbo mma 😉
Maka ugbu a, ejidere m n'ihi ebe nchekwa. M ga-echere ibudata iso na gburugburu ebe obibi zuru oke 🙁
Ndewo Elav, ị zaghị m, mana ..
Ajụjụ: you nwere ike ịme nkuzi ugbu a na nwụnye a?
SUSE Linux VS Ukpu okpu?
Atụmatụ: Dochie ogwe na Gnome2